အဘယ်သို့ငါ FSX ဗားရှင်းကိုငါ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ install သောသိနိုင်သနည်း FSX-SP1, SP2 သို့မဟုတ် Acceleration? - Rikoooo
ငါဘယ်လို FSX ဗားရှင်းကိုငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်သောသိနိုင်သနည်း FSX-SP1, SP2 သို့မဟုတ် Acceleration?
Start ကို FSX, သင်ချင်တယ်ဆိုလေယာဉ်ပျံနှင့်တကွသင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာလေယာဉ်, စတင်ဖို့: သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်သော FSX ၏ version ကိုသိရဖို့ကလွယ်ကူပါသည်။ အခုဆိုရင်သင့် screen ၏အပေါ်ဆုံးမှာ, (ပြီးသားဖွင့်လှစ်မလျှင်) မီနူးဘားတန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ညာဘက်«အကူအညီ»အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤတွင်«အကြောင်း»အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အောက်ပါပြတင်းပေါက် FSX သင့်ရဲ့ဗားရှင်းနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်: